Ihe 5 dị mkpa iji chọọ na Formdị inlọ Ntanetị |ntanetị | Martech Zone
Y’oburu na ichoro uzo di nfe, oru oma, na nchekwa nke ichota ihe ichoro n’aka ndi ahia gi, ndi oru aka gi, ma obu ihe ndi ichoro, o nwere ike bu na onye na acho akwukwo na ntaneti nwere ike iweli onu ahia gi. Site na itinye usoro ntanetị n'ịntanetị na nzukọ gị, ị ga-enwe ike ịhapụ usoro akwụkwọ na-ewe oge ma chekwaa oge, ego, na akụrụngwa.
Agbanyeghị, enwere ngwaọrụ dị iche iche ebe ahụ ịhọrọ, na ọ bụghị ha niile ndị na-ewu ụlọ n'ịntanetị kere eke. Na blọọgụ a, ị ga - amụta maka ihe ise ị ga - enwerịrị ike ị ga - elekwasị anya mgbe ị na - ahọrọ ụdị ntanetị maka nzukọ nke gị.
Njirimara 1: limiteddị Unlimited na Nzaghachi
Ma ị na-arụ ọrụ maka obere azụmaahịa ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ, ị ga-ahọrọ onye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetị na ikpo okwu nchịkọta data na-enye gị ohere iwulite ọtụtụ ụdị ma nakọta ọtụtụ ụdị nzaghachi dịka ịchọrọ. Ọtụtụ ngwaọrụ dị ebe ahụ na-etinye okpu na ụdị ụdị ị nwere ike iwulite ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke nzaghachi ị nwere ike ịnakọta, nke nwere ike ibute nsogbu karịa ka ọ na-edozi.
Mgbe ịmalite itinye ụdị ntanetị n'ịntanetị maka ihe ndị ị chọrọ iji mee ihe, ị nwere ike ịchọpụta ụzọ ndị ọzọ na-enye aka iji jiri ha nke ị na-echebeghị na mbụ. Maka nke a, ọ bụ ezigbo echiche iji hụ na tupu oge eruo na onye na-ewu ụdị gị ga-enwe ike ịnabata mkpa gị n'ọdịnihu. Na ogologo oge, onye na-ewu ụdị a na-akparaghị ókè bụ nhọrọ nwere ike ịbelata, ntụkwasị obi, na ọnụ ahịa dị ọnụ ahịa.
Njirimara 2: Ogologo Ike nke Ike
Ihe mgbaru ọsọ bụ isi nke iwuli ụdị na ịnakọta nzaghachi na ntanetị bụ ime ka usoro azụmahịa dị mfe. Iji mee nke ahụ n'ihu, ọ dị mkpa ịhọrọ onye na-ewu akwụkwọ ntanetị nke kwekọrọ na ngwaọrụ na teknụzụ ị na-eji. Mpempe akwụkwọ ntanetị nwere ike ijikọ na sistemụ ndị ọzọ na - akpaghị aka, na - echekwa gị oge na mbọ karịa.
Ọ bụrụ na ị na-eji CRM dị ka Salesforce, chọọ ụdị ntanetị nke nwere ike, ike Mgbakwunye Salesforce. Formsdị ntanetị ndị ejikọtara na Salesforce nwere ike ịjupụta iji bulie njirimara-nke onye ọrụ, yana nwekwara ike imelite, lelee, ma mepụta omenala na ọkọlọtọ ihe na Salesforce. Ikike ndị a nwere ike ịbawanye arụpụta ma gbanwee usoro nhazi.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe Kentucky YMCA Ntorobịa Association nakweere Salesforce, ndị ọrụ na-eburu FormAssembly n'otu mgbanwe ngwa ngwa. Ime nke a emeela ka nzukọ ahụ rute karịa ụmụ akwụkwọ 10,000 kwa afọ site na ijikọ ahịa Salesforce. Ikike ịnakọta ma jiri data dị ọcha, ahaziri ahazi na Salesforce na-enye ndị otu ohere ịkwado obodo ha nke ọma.
N'otu aka ahụ, njikọta na Google, Mailchimp, PayPal na ngwaọrụ ndị ọzọ ga - eme ka nchịkọta data gbasaa maka ndị ọrụ gị na ndị ahịa gị.
Njirimara 3: Nche na Nrube isi
Ma ị na-anakọta data n'aka ndị ahịa, ndị ọrụ, ndị ọrịa, ndị ọrụ afọ ofufo, ma ọ bụ atụmanya, nche na nnabata bụ ndị na-enweghị mgbagha. Họrọ onye na-ewu ụdị mpempe akwụkwọ na nchịkọta data nchịkọta nke na-agbaso iwu nzuzo data metụtara gị na ndị ahịa gị, dị ka HIPAA, GDPR, GLBA, CCPA, PCI DSS Level 1, na ndị ọzọ. Mgbe ị na-ahọrọ ikpo okwu na-ekwenye ekwenye, ọ bụghị naanị na ị na-echekwa data ị nakọtara, mana ị na-ewulitekwa ntụkwasị obi na ndị ahịa gị.
Iji debe mpempe akwụkwọ gị na nzaghachi gị nke ọma, chọọ maka ezoro ezo na ezumike. Ọzọkwa, jide n'aka na ikpo okwu gị nwere nhọrọ maka ichebe data dị oke mkpa dịka ọ dị mkpa. Site na usoro nchekwa ndị a, ị ga-enwe ike zuru ike na data niile ị nakọtara na-anọ n'aka nri.
Njirimara 4: Mgbanwe na Nhazi
Mgbe ị na-ahọrọ onye na-ewu ụdị akwụkwọ, ị ga-achọ ijide n'aka na ị ga-enwe ike ịhazi ụdị gị iji gboo mkpa gị. Kama idozi maka ụdị ndị siri ike iru, họta ikpo okwu na-enye ọtụtụ ndebiri ndebiri maka inyere gị aka ịmalite ụkwụ aka nri.
Ezigbo onye na-ewu akwụkwọ na nchịkọta data ga-adị mfe iji n'agbanyeghị ike ọrụ aka gị. Iji hụ na ndị otu gị nwere ike ịdebanye aha na ọsọ ọsọ na-enweghị ịdabere na ndị otu IT gị, họrọ nke na-enye koodu na-enweghị koodu, mmekọrịta enyi na enyi. Ọ dịkwa mkpa ịlele iji jide n'aka na ị ga-enwe ike hazie ụdị gị 'nhazi na imewe iji kwekọọ na njirimara ụlọ ọrụ gị maka ahụmịhe onye ọrụ na-enweghị ntụpọ.
Njirimara 5: Nkwado Ndị Ahịa A Pụrụ elitụkwasị Obi
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, jide n'aka na ị na-ahọrọ usoro ntanetị weebụ na ntụkwasị obi ahịa nkwado otu egwuregwu ma ọ bụrụ na ịnwee ajụjụ ọ bụla, nchegbu, ma ọ bụ njide. Dabere na ụdị data ị na-anakọta, ị nwere ike ịchọrọ ịhọrọ nhọrọ nke na-enye nkwado kachasị mkpa ọ bụrụ na mberede ọ bụla. Ka nzukọ gị wee nwee oke egwu maka ego ya, ị ga-achọ ijide n'aka na ndị otu nkwado ndị ahịa ha dị njikere ma dị njikere inyere gị aka ịnagide nsogbu ọ bụla.
Platformsfọdụ nyiwe na-enye nkwado na mmemme iji nyere ndị ahịa aka ịkwụsị nnukwu ọrụ, nke nwere ike ịba uru dị ogologo oge. Ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbagwoju anya dị mkpa ma chọọ enyemaka ka ị na-ebili ma na-agba ọsọ, nkwado ntinye bụ onyinye bụ isi maka ịchọ.
Mgbe ị nọ ebe ahụ na-achọ ụdị nrụpụta ntanetị zuru oke na ikpo okwu nchịkọta data iji mee ka usoro ọrụ gị dịkwuo mma, gbaa mbọ hụ na ị ga-eburu atụmatụ ise ndị a dị mkpa.
AdịMgbakọ bụ ihe na-ewu ihe niile na nchịkọta data nchịkọta nke na-enye atụmatụ ndị a niile na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọtụtụ puku ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ niile na-eji njikọ siri ike nke FormAssembly, ụkpụrụ dị elu nke nchekwa na nnabata, na onye na-ewu ụdị mfe iji dozie nsogbu nnakọta data ma mee ka usoro dị mgbagwoju anya dị mfe.
Hụ FormAssembly bi na nnwale n'efu, enweghị kaadị akwụmụgwọ achọrọ. Jiri Martech ZoneOnwe onye nwe ego na koodu DKNEWMEDFA20.
Ọnwụnwa efu nke AdịMgbakọ
Tags: ccpannabatanchịkọta dataụdị onye na-ewu ụlọụdị ndị nrụpụta ụdịnhaziNchịkwaGLBAgoogleHIPAAonye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetị